Löfven oo niyad jab ka qaadey natiijada doorashada Norwey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha xisbiga Socialdemokratiga Stefan Löfven. Foto: Ola Torkelsson/Scanpix
Löfven oo niyad jab ka qaadey natiijada doorashada Norwey
La daabacay tisdag 10 september 2013 kl 09.53
Hogaamiyaha xisbiga Socialdemokratiga Iswiidhen Stefan Löfven ayaa sheegay in uu ka xumaadey natiijada doorashada Norweyd oo xilka looga tuurey hogaamiyahii Socialdemokratiga Norwey Jens Stoltenberg.
- Waa arin welwelkeed leh. Dadka Norwey weyaan kuwa wax doortey waana xushmeynayaa laakiin waxaa welwelkeeda leh in xisbi midigta siyaasada fudud ay kaalin ku yeeshan xukumada soo socota ee dalka Norweyd ayuu yeri Stefan Löfven.
Xisbiga midigta siyaasada fudud oo uu Löfven ka welwelsan yahey ayaa ah xisbiga FRP Fremskritpartiet oo siyaasadiisa diidantahay sooogalootiga iyo qaxootiga.
Dhanka kale ra'iisalwasaare Fredrik Reinfeldt ayaa asna ka hadley natiijada doorashada dalka deriska la ah Iswiidhen.
- Waxaan telefoon ku direy una tahniyadeeyey Erna Solberg iyo guusha xisbigeeda Höyre ka soo hooyeen doorashada. Waa mid aniga si gooni ah iiga farxineysa madaama aniga iyo Erna sannadyo badan soo wado-shaqeynay, kalana baranay dib u cusbooneynta mid walba xisbigiisa uu ku sameeyey, ayuu ku yeri Fredrik Reinfeldt qoraal xalay la soo gaarsiiyey wakaalada wararka TT.
Xisbiga talada Iswiidhen haya ee uu hogaamiyo Fredrik Reinfeldt Moderaterna iyo xisbiga guuleystey ee Norweyd Hoyre ayaa ah labo xisbi oo siyaasad ahaan isku dhow. Labadaba waxaa lagu tiriyaa in ay hayiin xisbiyo dhanka midig.
Stefan Löfven ayaa aaminsaneyn in guuldarada u soo hoyatey xisbiga shaqaalaha Norweyd saameyn ku yeelan doonto xisbigiisa Socialdemokratiga natiijada uu ka soo hooyn doono doorashada sannadka soo socoda ee dalkan Iswiidhen.
- Mida noo xaqiiqowdey ayaa ah in dalka Norwey aan laga dooneynin siyaasad cusub balse la donayey siyaasiin cusub. Xisbiga guulesytey ee Hoyre marna tusaale kamo dhigan siyaasada midigta ah ee ka jirta Iswiidehn marka la soo qaato siyaasada iskuulada qaaska loo leeyahey iwm. Waan ku kalsoonahey sida ay wax ugu socdaan dalkayaga, ayuu yeri Stefan Löfven
Isha: laanta wararka Ekot